Izindaba - Isingeniso Sokusetshenziswa KwePolyacrylamide
Isingeniso Sokusetshenziswa KwePolyacrylamide
Isingeniso Kwa I-Use YePolyacrylamide
Sesivele siyiqondile imisebenzi kanye nemiphumela yabenzeli bokulungiswa kwamanzi ngokuningiliziwe. Kunezigaba eziningi ezahlukahlukene ngokuya ngemisebenzi nezinhlobo zazo. I-Polyacrylamide ingenye yama-polymer eqondile, futhi uchungechunge lwayo lwamangqamuzana luqukethe inani elithile lama-radicals. Ingamunca izinhlayiya eziqinile ezimiswe emanzini, ibhuloho ions noma izinhlayiya ezihlanganisiwe zibe ama-flocs amakhulu ngokukhokhisa ukungathathi hlangothi, ukusheshisa ukudilika kwezinhlayiya ezimisiwe, ukusheshisa ukucaciswa kwesisombululo, nokwenza ngcono umphumela wokuhlunga. Ukusetshenziswa okuningiliziwe kwayo kuzokwethulwa njengokungezansi kwakho.
1. Sebenzisa ekudakeni amanzi odaka
Lapho isetshenziselwa ukukhipha udaka, i-cationic polyacrylamide ingakhethwa ngokuya ngendle, engalususa ngempumelelo udaka ngaphambi kokuba udaka lungene kumshini wokuhlunga. Lapho isusa amanzi, ikhiqiza ama-flocs amakhulu, ayinamatheli endwangwini yokuhlunga, futhi ayihlakazeki phakathi nomshini wokuhlunga. Ikhekhe lodaka liwugqinsi futhi ukusebenza kahle kwamanzi emzimbeni kuphezulu.
2. Sebenzisa ekwelapheni amanzi angcolile angcolile
Lapho isetshenziswa ekwelapheni indle yasekhaya kanye namanzi angcolile angcolile, njengamanzi okudla notshwala, amanzi angcolile avela ezitshalweni zokuhlanza indle zasemadolobheni, amanzi angcolile kabhiya, amanzi angcolile wefektri ye-MSG, amanzi angcolile kashukela, amanzi angcolile, njll. Umphumela we-cationic polyacrylamide ungcono kune usawoti we-anionic, nonionic futhi wezinto ezingaphili izikhathi eziningana noma izikhathi eziphakeme amashumi, ngoba lolu hlobo lwamanzi angcolile ngokuvamile lukhokhiswa kabi.
3. Ukuhlanzwa kwamanzi aluhlaza emifuleni nasemachibini
I-Polyacrylamide ingasetshenziselwa ukwelashwa kwamanzi ompompi ngamanzi omfula njengomthombo wamanzi. Ngenxa yomthamo wayo ophansi, umphumela omuhle nezindleko eziphansi, ikakhulukazi uma zisetshenziswa ngokuhlangana nama-flocculants angavamile, ngakho-ke izosetshenziswa ezitshalweni zamanzi njenge-flocculant evela eMfuleni iYangtze, eMfuleni Ophuzi nakwamanye amabheshi.
Lokhu okungenhla ukusetshenziswa okuningiliziwe kwe-polyacrylamide. Njenge-ejenti yokwelashwa kwamanzi, inokusebenza okwengeziwe ekwelashweni kwendle. Kodwa-ke, ngaphezu kokusetshenziswa kwayo okubalulekile kulezi zici ezintathu ezingenhla, ingasetshenziswa futhi njenge-ejensi yokuqinisa kanye nezinye izithasiselo ekwenzeni amaphepha ukukhulisa izinga lokugcinwa kokugcwaliswa kwezingulube nezingulube, futhi kwandise amandla ephepha; njengezithasiselo ze-oilfield, njenge-anti-ukuvuvukala kobumba Kuyinto ejwayelekile yokuqina kwe-acidfield acidification; ingadlala indima enkulu kumenzeli we-textile sizing, ukusebenza okuzinzile kosayizi, usayizi omncane, isilinganiso sokuphuka esiphansi sendwangu, kanye nendwangu ebushelelezi.